အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅	8
Posted by kai on Oct 17, 2015 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 8 comments
ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်သွားမည်ဆိုလျှင် လူထုကြီးက မိမိတို့ကိုယ်စား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည့်သူကို ရွေးကောက်တင်မြောက်ပေးခြင်းဖြစ်စဥ-်ရွေးကောက်ပွဲ(၀ါ)မဲဆန္ဒခံယူပွဲကို လက်ခံရလိမ့်မည်။
ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတသည်၊မမျှတသည်က case-by-case တပိုင်း/တကန့်စီဖြစ်လေသည်။
အများဆန္ဒခံပွဲကိုမငြင်းစကောင်း။ ပါဝင်ပါတ်သက်ရမည်။ မဲပေးရွေးကောက်ပေးရမည်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ရွေးကောက်ခံရသူသည် မိမိကိုယ်စားပြုရာ နယ်ပယ်ဒေသတွင်လူထု၏ နိုင်ငံရေးကိစ္စအ၀အ၀ကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည်။
ဆန္ဒမဲပေးပြီးလျှင် လူထုအများစုသည်လည်း မိမိ၏နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်ထားရမူကိုလျှော့ချကာ နေ့တဓူဝကိစ္စ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ကျမ်းမာရေးကိစ္စများအတွက် အားစိုက်လုပ်ကြရပြန်ပါသည်။
တိုင်းပြည်တပြည်တွင် လူတိုင်း၏နိုင်ငံရေးရေချိန်သည် တချိန်လုံးမြင့်မနေသင့်။
အချိန်ကုန်လူပန်းလှပါ၏။ လူ့သက်တန်းအပါဝင် ဘ၀အချိန်ဟူသည် အတိုင်းအတာတခုရှိသည်မဟုတ်လော။
အမေရိကားတွင် အမေရိကန်တို့သည်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို Super Bowl အားကစားပွဲလောက်ပင်စိတ်မ၀င်စားကြ။ မဲပေးနိုင်သူ၏ 57.5%(2012 )မျှသာမဲပေးခဲ့ကြသည်။
အမေရိကပြည်ထောင်စုသည် အတိုးတက်ဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတခုပေတည်း။
ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လျှင် မည်သူတို့က မည်မျှမဲပေးခဲ့သည်ထက် မည်သူတို့ကမဲကိုရေတွက်သည်ကလွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ရေတွက်ခြင်းတို့ တရားမျှတမှန်ကန်ရန် စောင့်ကြည့်ကြရမည့်တာဝန်မှာ လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တို့တွင်ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတို့တွင်ရှိသည်။
လက်တွေ့တွင် ဘက်လိုက်ကင်းကြခြင်းဟူသည်ဖြစ်ခဲရကား မိမိ၏ပါတီဝင်များကို ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းလိုက်သောဆိုင်ရာပါတီကြီးတို့တွင် မူလတာဝန်ရှိပါသည်။ အခြေအနေကိုတပြေးညီလူအများစုအားအသိပေးရသော မီဒီယာတို့တွင်တာဝန်ကြီးရှိပါသည်။
အမေရိကားတွင် ပါတီကြီး၂ခုအလိုကျ Mainstream media (MSM) ခေါ် အဓိကမီဒီယာအုပ်စုကြီးများလည်းဘက်လိုက်ကြသည်။
အထင်ရှားဆုံးအဖြစ် FOX News နှင့် MSNBC ကိုကြည့်နိုင်သိနိုင်သည်။
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကောင်း၏ ဘက်ဟူသည် သူမှားသည်ကိုယ်မှန်သည်မရှိ လူထုအများစုပေါ်မူ၍ အုပ်စုဖွဲ့ရပ်တည်ကြခြင်း သဏ္ဍန်သာဖြစ်သည်။ ဘက်တို့၏နောက်တွင်ငွေရှင်ကြေးရှင်သူကြွယ်များ ငွေလက်ကြီးသမားများရှိရမည်။
ငွေကြေး(စံနှုန်းတခုအဖြစ်မြင်သာစေရန် ပြယုတ်)ကိုပဓာနထားသော အမေရိကဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် ပါတီကြီးတိုင်းအတွက် ငွေထုတ်ပေးရသည့်ငွေရှင်ဟူသည် ခရိုနီဟု ဆိုစေဦး လိုအပ်၏။
အစိုးရပိုင်ဖြစ်သော သတင်းစာများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတို့သည် လက်ရှိအာဏာရပါတီဖက်ကို ယိမ်းကာ တွန်းကြပါသည်။
ဤသည်ကို ဟန်ချက်ညှိရန် ပုဂ္ဂလိကနှင့်လစ်ဘရယ်သမားအများစုတို့တည်ထောင်ထားသော မီဒီယာများကအတိုက်အခံဖက်သို့ ဘက်လိုက်ကြရပေမည်။
လစ်ဘရယ်(လွတ်ပြန့်စွဲ)သမားသည် လွတ်လပ်သော ခေတ်ညီ/လွန်အတွေးအခေါ်ထားသည်။ အစိုးရသို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့သမဂ္ဂနှင့်စုစည်းအလုပ်လုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်( ရှေးရိုးစွဲ)သမားသည် ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းစီ၏ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှီတည်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု၊ဓလေ့၊ဘာသာရေးအစွဲထားဆုံးဖြတ်သည်။ အစိုးရ၏ပါဝင်ပါတ်သက်မှုကြီးသည်ကိုမကြိုက်။
အမေရိကားတွင်ကား ယခုသမ္မတအိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက်ပါတီကို လစ်ဘရယ်ယိမ်း(ဘယ်)ခေါ်၍ ရီပါဗလစ်ကန်င်ပါတီကို ကွန်ဆာဗေးတစ်ယိမ်း(ညာ)ခေါ်ပါသည်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး(၁၇၈၉)အတွင်း အမျိုးသားညီလာခံအတွင်း ဘယ်ညာခွဲခြားထိုင်နေမှုအရကောက်ပြီး လစ်ဘရယ်သမားများကို ဘယ်ခေါ်လျှက် ရှေးရိုးစွဲသမားများကို ညာယိမ်းသူများသမုတ်သည်။
သို့ဆိုပါလျှင် ဟိုမှာ၊ဒီမှာ အစွန်း၂ဖက်ထွက်လာသည်ကို မြင်ရပါမည်။ ဘယ်စွန်းရောက်လွန်းလျှင် လွတ်စွန်းစွဲခေါ်မည်။ ညာစွန်းရောက်လွန်းးလျှင် ရှေးစွန်းစွဲခေါ်မည်။
ဘယ်စွန်းစွန်းတွင်မင်းမဲ့စရိုက်ရှိကာ ထိုမှ ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်တို့ဖြင့်လာသည်။
ညာစွန်းစွန်းတွင်ဖက်ဆစ်စနစ်ရှိကာ ထိုမှနာဇီ၊ သက်ဦးဆံပိုင်၊ ရှေးရိုးစွဲတို့လာသည်။
ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ် မဇ္ဇိမပဋိပဋာ(အလယ်အလတ်) အရကောက်ပြောလျှင်မူ အစွန်းရောက်လျှင်မည်သူ/မည်သည်မှ မကောင်း။
သမ္မတများကိုကြည့်၍သိသာပါသည်။ ယခင်သမ္မတဘုရ်ှတို့သည် ရှေးရိုးစွဲ၍ ညာဝင်ရိုးအလယ်မျှလောက်တွင်ရှိသောသူဖြစ်၍ အိုဘားမားသည် လွတ်ပြန့်စွဲဘယ်ဝင်ရိုးအလယ်လူဟုဆိုကြပါစို့။
အမေရိကန်ဖြစ်သောသင်သည် ပုံမှန်မည်သည့်သမ္မတကိုမဲပေးခဲ့သနည်းနှင့်နှိုင်းကာ ရှေးရိုးစွဲလော။ လွတ်ပြန့်စွဲသမားလေဟု သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သက်တန်း နှစ်၂၄၀မျှ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်၍ အတော်အတန်တိကျသော နိုင်ငံရေးဝင်ရိုးဖေါ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အဖေါ်လွန်ကာ သမ္မတရာထူးကိုပင်
(သာမန်အားဖြင့်) ဘယ်ညာသမားများ ၈နှစ်တလှည့်စီယူနေကြလေသတည်း။
ဘာသာရေးလိုက်စားလွန်းသူ၊ ဘာသာရေးသမားများမှာ ရှေးရိုးစွဲများဖြစ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲတွင်လည်း ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည် ရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါသည်။ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာသည် လစ်ဘရယ်ပိုဆန်သည်။
ခရစ်ယန်တွင်လည်း ရိုမန်ကက်သလစ်သည် ရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါသည်။ ပရိုတက်စတင်န့်သည် လစ်ဘရယ်ဆန်သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကူးပြောင်းမှုထဲသို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီမှုအပေးဆုံး အမေရိကန်တို့၏ပါတီမှာ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ဖြစ်၍ အဓိကထောက်ပံ့သူအရင်းရှင်များမှာလည်း ကွန်ဆာဗေးတစ်သမားများသည်။ ထိုအကူအညီများကိုတော်လှန်ရေးသမား၊ ပညာတတ်အနုပညာသမား ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအများစုဖြစ်သော
ဗမာ့လစ်ဘရယ်သမားများကလက်ခံရယူရင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ထုဆစ်ပုံဖေါ်နေကြသည်ကို တွေ့ကြရလိမ့်မည်။
အိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက်ပါတီကား သဘောတရားရေးရာ ပေါ်လစီအားဖြင့်မူ အကူအညီများပေးပါ၏။ မြန်မာပြည်သို့ သူကိုယ်တိုင်၂ခေါက်သွားခဲ့ခြင်းက ပြယုတ်တည်း။
သို့သော်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတို့တွင် (ထုံးစံအတိုင်း) စံနှုန်းအားဖြင့်တိကျမူ မရှိသေး။
မြန်မာပြည်သည် ဦးနု၏ ဘာသာရေးနွယ်သော ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအောက် တိုင်းပြည်နုနုတွင် မုန်တိုင်းကြမ်းဒဏ်ခံလိုက်ရပေရာ ပြည်တွင်းစစ်ကိုကြောက်လျှက်မှ မိမိဘ၀တို့လုံခြုံရေးအတွက် စစ်လက်နက်လိုလားခြင်းမသိစိတ်ဝင်ပါနေသည်။
ဦးနေ၀င်း၏ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အောက်တွင် ဘုံစနစ်၊သမ၀ါယမခေတ်အောက်မှ ချမ်းသာနေသော အရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးတို့ကို မျှော်မှန်းအလိုရှိသည်။
ထိုထို မသိစိတ် ပဋိပက္ခတို့သည် ယခုလိုခေတ်ပြောင်းဝယ် ပွင့်အန်ထွက်နေကြဟန်ရှိပါသည်။
ဘာသာရေးခံယူချက်များလျှက်မှ ကွန်မြူနစ်သဘောတရားများနှစ်သက်သည်။ ဂေးအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများကိုမကြိုက်လျှက်မှ ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါသည်။ အစိုးရကို မုန်းလျှက်မှ မှီခိုလွန်းသော စိတ်ထားတို့ရှိသည်။ သဘာ၀၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအော်လျှက်မှ ဖျက်စီးသည့်လမ်းပေါ်လျှောက်နေသည်။
မိမိနှင့်မိမိအတ္တတို့ကိုအခြေပြုလွန်းလျှက်မှ မိသားစုနှင့်အများအကျိုးဆောင်ရွက်ပူးပေါင်းတတ်သည်။ ချမ်းသာသူများကို ဆိုရှယ်လစ်နို့နံ့သက်လျှက် မုန်းလျှက်(မဈိယစိတ်ထားလျှက်)မှ ထိုသူတို့အားကိုမျှော်သည်။
ဓလေ့ထုံးစံများကို ဖက်တွယ်ထားလျှက်မှ သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များကို တိုက်ရိုက်လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
ဦးသိန်းစိန်(ပြည်ခိုင်ဖြိုး)ကို ကွန်ဆာဗေးတစ်နေရာထားလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(အဖွဲ့ချုပ်)ကို လစ်ဘရယ်အလယ်ချကြည်ကြစေလိုသည်။
သို့နှင့် ဟန်ချက်ညီသွားကာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်လာမည်ထင်ပါသည်။
အင်းအား၎သိန်းကျော် တပ်မတော်သည်ကား ကြားနေသင့်သည်။ သေနတ်ကြီးတကားကားနှင့်ဘက်လိုက်၍ကားမသင့်။
သေနတ်ပစ်ချကာ အရောင်ပါအ၀တ်ချွတ်၍ နိုင်ငံရေးလုပ်ပါလေ။
သို့ဆိုသော် မိမိဦးစီးဦးဆောင်ပြုခဲ့ရာ တပ်ကိုကား အာဏာလက်ကျန်တန်ခိုးမပြသင့်။
ထို့အတူပင် အ၀ါဖြစ်သောရဟန်းများလျှင်လည်း ဓမ္မစက်နှင့် ဘက်မလိုက်သင့်။ လူအများစုမှီခိုအားထားရာဖြစ်သော အင်အား ၅သိန်းကျော်ကြီးထဲက ဘက်လိုက်ပါလျှင် နိုင်ငံရေးသာမက သံသရာရေးအဖုံဖုံတို့မည်မျှကမောက်ကမ ဖြစ်နိုင်မည်ကို တွေးကြည့်မြင်နိုင်ပါသည်။
သေနတ်လက်နက်၊ ဓမ္မစက်တို့ဖြင့် အာဏာစက်ယူလျှင် ခြိမ်းခြောက် အကြမ်းဖက်ခြင်းမည်သွားပါသည်။
“ပေဖြစ်လျှင်ခံ၊ တရံမမှု၊ တူဖြစ်ထုလော့” ဟု ရှေးရိုးစကားရှိသည်။
မပြည့်စုံဟုထင်သည်။ တကယ်တော့ ပန်းပဲထုလျှင် ပေနှင့်တူကြားတွင် ပုံဖေါ်ရမည့် သံထည်တခုရှိပါ၏။
ပေနှင့်တူသည် ထိုသံထည်ကို အသုံးဝင်သောဝတ္တုဖြစ်အောင်ပုံဖေါ်ပေးရသည့် အရာတို့သာဖြစ်ပါ၏။
ပြည်သူလူထုအများစု သဏ္ဍန်ပီပြင်သော ဒီမိုကရေစီခေတ်အောက်ရောက်အောင် ကြိုးစားတလှည့် ပေးကြည့်ပါလေ။ ပါတီ၂ဖက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ကို အားကိုးပါ၏။
ယခုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ မည်သူနိုင်လျှင် မည်သည့်အကျိုးဖြစ်မည်ထင်ရှားမြင်သာရှိနေပါ၏။
ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပါတီသို့ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရသည် အလုပ်ကားများမည်သေချာသည်။
တိုင်းပြည်သည်အကြွေးနွံနစ်နေကာ အရံငွေလည်းနည်းလှပါပြီ။ ထိုအထဲ တူးသွန်းထုတ်နှုတ်ရောင်းတုတ်လိုက်သော သယံဇာတများလည်းပြုတ်လုပြီ။
သဘာဝဘေးကြီးများလည်းကြုံခဲ့ပြီ၊ ကြုံဦးမည်။ အစွန်းတို့ကိုလည်းနင်းခဲ့ပြီ၊ နင်းဦးမည်။
မြန်မာနှင့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘယ်ညာစံနှုန်းမကျခင် ချိန်ညှိကာလဟု ဟူလို။
သို့ဆိုသော် လစ်ဘရယ်ယိမ်းသော NLD ကို ထောက်ခံကြရင်းမှ ငွေကြေးချမ်းသာသူ၊ ဘာသာသာသနာချပြစည်းရုံးမှုအောက်ပါသွားပြန်ကာ မိမိ ဘယ်လောညာလော။ လစ်ဘရယ်လော။ ကွန်ဆာဗေးတစ်လော ရောထွေးနေကြဟန်ရှိပါသည်။
အရာရာသည် ယင်-ယန်၊ ဖို-မ၊ ပူ-အေး ၂ဖက်မျှ မှဟန်ချက်ချ၍ရသည်။
အနီတို့လွှမ်းပါလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်ပါစေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခြံစည်းးရိုးးပေါ်က လူတွေ အဘတို့ ဘက် ခုံ ချပြီးး
အမေ့ဘက်ကို လူ ခုန်ချကြလော့..!!
ဘယ်ပေါင်ကပ်ရမတုန်းး ယောင် တဆုံးး လုပ်မနေကြနဲ့လော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: တိုင်းပြည် ချောက်ထဲကျရန် လက် ၂ လုံး အလိုတွင် ချောက်ထဲသေချာပေါက်ကျရန် ကူညီခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းကြီးးအားးးး
ယခု ချောက်ထဲမှ လွတ်ရန် လက်၂လုံးးအလို တွင် ချောက်ထဲသို့ ပြန်ကျရန် မကူညီစေချင်ပါကြောင်းး တောင်းပန်အပ်ပါသည်…!!!
@QUIL@ says: မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကူးပြောင်းမှုထဲသို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီမှုအပေးဆုံး အမေရိကန်တို့၏ပါတီမှာ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ဖြစ်၍ အဓိကထောက်ပံ့သူအရင်းရှင်များမှာလည်း ကွန်ဆာဗေးတစ်သမားများသည်။ ထိုအကူအညီများကိုတော်လှန်ရေးသမား၊ ပညာတတ်အနုပညာသမား ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအများစုဖြစ်သော ဗမာ့လစ်ဘရယ်သမားများကလက်ခံရယူရင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ထုဆစ်ပုံဖေါ်နေကြသည်ကို တွေ့ကြရလိမ့်မည်။
Alinsett @ Maung Thura says: ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လျှင် မည်သူတို့က မည်မျှမဲပေးခဲ့သည်ထက် မည်သူတို့ကမဲကိုရေတွက်သည်ကလွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ …
အဲဒီအချက်ကို ကျနော်လည်း အတော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်..
US မှာ ဆိုရင်ကော…
အဲဒီ မဲပေးပုံ မဲသိမ်းပုံ.. မဲ ရေတွက်ပုံ.. ဆုံးဖြတ်ပုံ.. စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ကို ဘယ်လို
သမာသတမတ်ကျစွာ လုပ်သွားသလဲ… ဘယ်လို စနစ်တကျ သေချာတိကျစွာ လုပ်ဆောင်သလဲဆိုတာ..
.ပြောရရင်… ဒီမှာက… မဲပေးပုံတောင်…အတော် ရှင်းပြနေရသေးတဲ့ အဖြစ်…ဆိုတော့…
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် … ဘယ်လို သွားတယ်..ဘယ်လို အသွားသင့်ဆုံးဆိုတာ..
ကျနော်လည်း သေချာ မသိ.. .။
pooch says: “လစ်” ဖြစ်ဖို့ “တစ် “ရှိဖို့ လိုသလို
“တစ်” ဖြစ် ဖို့ “လစ်” ရှိဖို့ လိုတယ်
ဒါကြောင့်မို့ လစ်ရော တစ်ရော အစွန်းမရောက်ဖို့ ပဲ သတိထားရမယ်
လို အပ်ရင် အလိုက်သင့် ယိမ်းရုံလေး ယိမ်းပေါ့ လစ် ချင် လစ် တစ် ချင် တစ် ပါ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ချိန်ရောက်ရင် အကုန်ပြောင်းလဲ ရမှာပဲ
we needachange..!!!
we can change…!!!!
Change Change Change…!!!!!
ムラカミ says: No.
လိုနေတာ Change မဟုတ်…
လိုနေတာ Transormation ရော်…
ကွာတာ မသိရင် မူလတန်းပြန်ဆင်းကြ ဆိုပြောရင် ကျုပ်ကို သတ်ကြလိမ့်မယ်
တကယ်က … ကွာတယ်ဗျ….
who gonna shape our future?
no, i’m gonna shape my futrue on my own vision.
ဘယ် အကောင်ထီးအကောင်မ မှ အချယ်လှယ်မခံဘူး…။
ငလှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်။ ငကျောင်းငါတည် အ၀ီဇိရောက်ရောက်…။
ကျန်တာသိပ်မပြောလို…။ တဘ၀မှာ တခါရတဲ့ လူ့ဘ၀…
သည်တသက်ပဲ အသက်ရှင်ရတာ ….။
ကိုယ် ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်…၊ ဘယ်သူမှ ကယ်တင်ရှင်မဟုတ် ၊ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်၊
ဘယ်တယောက်မှ ဘ၀ လွတ်မြောက်ရေးရာ ထောက်ကူပေးနိုင်သူမဟုတ်…။
လစ်ချင်လစ် တစ်ချင်တစ် … စနစ်ကြောင့် လူကြောင့် မဟုတ်ဘူး…
မှန်ကြည့်ရင် အထဲက လှောင်ပြုံးပြုံးပြနေမယ့် ငတိကြောင့်ဗျ ……။
ခင်ဗျား တနေ့ တနေ့ မှန်ထဲက ငတိကို ဘယ်နှခါ လှောင်ပြုံးပြုံးပြနိုင်ဘီလဲ…?
ဒမော့ခွက်စီတွေ … လစ်ဘရယ်တွေ …. ဖက်ဒရယ် တွေ နောက်မှပြော…
မှန်ထဲက ကိုယ့်အရိပ်ကို ကိုယ် လွှမ်းမိုးနိုင်ပီလား အရင်ပြော….။ အဲ့ဒါပဲ….
pooch says: Transformation မဟုတ်ဖူးလား
Transormation ရှိဘူးလားလို့ပါ ငါက သူရဲကြောက်လို့ မှန်မကြည့်ဖူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ပုရ်ှကိုခြစ်တယ်။ ပုရ်ှလေးကို ကုန်းပိုးပီး ဧဝက်တောင်ထိပ် တက်ခြင်သယ်။ ခြစ်မှာလားပုရှ်.. ခြစ်ယအောင်နော်….